Ungabhalisa njani kwiTwitch Channel? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 383
Iqonga lewebhu leTwitch ngokungathandabuzekiyo liye laba lelona lithandwa kakhulu kwaye likhaya kubathandi bemidlalo yevidiyo. Ngaphezu koko, eyabo babizwa ngokuba "ngabasasazi" okanye izihambisi ezibukhoma zomxholo. Aba bantu basebenzisa eli jelo ukwenza imali ngexesha labo kwaye kwangaxeshanye bonwabe kwaye bonwabele umhlaba ophindwe kabini onikezelwa yimidlalo yevidiyo kunye ne-intanethi.
Kodwa into abaninzi abayikhathalelanga kukuba ngaphandle kokuba sisicelo sasimahla kunye nokujoyina nayiphi na imijelo ngokwasekhaya akukho mfuneko yokuba uhlawule nantoni na. Le fomathi yewebhu Inika ithuba lokufumana izibonelelo ezininzi, xa ufumana ingxelo ehlawulelweyo yoku, uninzi lwabalandeli bakhe abacinga ngokufanayo abangazaziyo. Ngale ndlela, inqaku elilandelayo liza kugubungela iinkcukacha ezininzi ngesi sihloko.
Iqonga leTwitch ngaphandle kwamathandabuzo Enye yezona ndawo zifunwa kakhulu kwi-intanethi, iqwalaselwe njengejelo apho abantu bavunyelwe ukuba bathengise kwaye babonise zonke iintlobo zomxholo kusasazo lwe-Intanethi.
Kodwa kukho ukhetho olubizwa ngokuba "ITwitch Prime ”, luguqulelo lwenkonzo olufunyenwe ngomrhumo, apho abantu baqesha khona ukufumana izibonelelo ezipholileyo, ngokungafaniyo nabasebenzisi abaqhelekileyo. Okwangoku kuqhelekile ukuba iinkonzo ezahlukeneyo ze-Intanethi zibe neenguqulelo ezimbini, enye isimahla kwaye enye, njengoko kunjalo kwiTwitch ehlawulelweyo.
Oku kusebenza kubasebenzisi be-intanethi ukuba bajonge inkonzo yasimahla kwaye emva koko bathathe isigqibo sokuba bafuna ukufumana izibonelelo ezipheleleyo zeapp. Inkqubo yentlawulo esele ikho kukuphuculwa kweqonga lokusasaza ngqo.
Uyibhalisela njani iTwitch Gaming
Ngokukhetha olu khetho, akusenakwenzeka ukuba ukonwabele iTwitch kuba iakhawunti ephambili yeAmazon apho umsebenzisi anokufumana khona izibonelelo zihambelana nayo. Uyifumana njani imidlalo yasimahla ngenyanga, ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe kukuba yayisaziwa ngaphambi kwegama elithi "Twitch Prime" kwaye ibizwa ngokuba yi "Prime Gaming" ngoku.
Le nkonzo ifakiwe kuphela kwi-Amazon Prime subscription xa umntu eseSpain, oko kuthetha ukuba kwanele ukuhlawula zonke iinkonzo zeli qonga ukufezekisa izibonelelo ezinjalo. Kodwa kubantu abangenakho ukufikelela kubo, kunokwenzeka ukuba ufumane inkqubo yasimahla yenyanga enye, Apho ukuxhasa khona inkonzo kwaye uyigcine kamva, 3. 99 yeerandi kufuneka ihlawulwe inyanga nenyanga.
Ukongeza, izibonelelo ezininzi, ezinje ngomxholo owahlukileyo okhethekileyo, zinokufezekiswa ngolu khetho, umzekelo, ziyafezekiswa; imidlalo yasimahla, ukungeniswa okukhawulezileyo, kunye nosasazo lwasimahla olungenasiphelo kunye nevidiyo ephambili. Ukuba uqwalasela ukhetho lwe "Video Prime", ikwaqulathe ezinye izibonelelo, njengalezo ziboniswe ngezantsi.
Ukufikelela kumxholo othile kunye nomdlalo wevidiyo ngaphandle kwendleko. Uthotho lweempawu ezizodwa ezigcinelwe kuphela amalungu agciniweyo enkonzo. Iinketho ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso, ezinjengemibala yengxoxo, kubandakanya ukuguqulwa kwengxoxo. Ukugcinwa kosasazo oludala olunokujongwa ngokuqhubekayo kwiintsuku ezingama-60 ukusuka kumhla wosasazo.
1.1 Uyibhalisela njani iTwitch Gaming
2 Zongezelelweyo iinzuzo